အရေးပျေါတားဆေးနှငျ့ အမေးအမြားဆုံးမေးခှနျးမြား - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
မေး ၁။ အရေးပျေါတားဆေးကို ဘယျအခြိနျသောကျရလဲ?
ဖွေ – အတူနပွေီး နာရီ ၁၂၀အတှငျး သောကျရပါတယျ။
စောစောသောကျလေ အာနိသငျပိုရှိလပေါ။နောကျကမြှသောကျလေ အာနိသငျလြော့နညျးလပေါ။
(* အတူနပွေီး ၂၄နာရီအတှငျးသောကျမယျဆိုရငျ ကာကှယျနိုငျစှမျး 95%ရှိပွီး၊ အတူနပွေီး ၇၂နာရီအတှငျးသောကျမယျဆိုရငျတော့ ကာကှယျနိုငှစှမျး 89%ရှိပါတျး။ဆိုလိုတာကာ….ဆေးသောကျတာစောလေ ထိရောကျမှုပိုရှိလဖွေဈပွီး၊ ဆေးသောကျနောကျကလြေ ကာကှယျနိုငျစှမျး လြော့ကလြဖွေဈပါတယျ။)
မေး ၂။ အရေးပျေါတားဆေးက ၂လုံးလား? ၁လုံးတညျးလား?
ဖွေ – ထုတျလုပျတယျ့ ကုမ်ပဏီပျေါမူတညျပွီး ၂လုံးတှဲရှိသလို၊ ၁လုံးတညျးသောကျရတာလညျးရှိပါတယျ(ဥပမာ – Lydia ကထုတျတဲ့ အရေးပျေါတားဆေး
1 Safe Pill ဆိုရငျ ၁လုံးပဲသောကျရပါတယျ။)
မေး ၃။ အရေးပျေါတားဆေး ၂လုံးကဒျက တဈခါတညျး ၂လုံးသောကျရတာလား? တဈလုံးနဲ့ တဈလုံး အခြိနျခွားသောကျရတာလား?
ဖွေ – တဈခါတညျး ၂လုံး သောကျရတာပါ။
မေး ၄။ အရေးပျေါတားဆေးသောကျပွီး နောကျတဈကွိမျလိငျဆကျဆံရငျ ဆေးထပျသောကျဖို့လိုလား?
ဖွေ – လိငျဆကျဆံအပွီး အရေးပျေါတားဆေးသောကျလိုကျတယျ။ပွီးနောကျ ၂၄နာရီအတှငျး နောကျတဈကွိမျ
လိငျထပျဆကျဆံတယျဆိုရငျ ဆေးထပျသောကျဖို့မလိုကာဘူး။၂၄နာရီကြျောပွီးမှ နောကျထပျဆကျဆံတယျဆိရွငျတော့ ဆေးထပျသောကျဖို့ လိုပါတယျ။
မေး ၅။ အရေးပျေါတားဆေးသောကျပွီး အနျရငျ ဆေးထပျသောကျဖို့လိုလား?
ဖွေ – ဆေးသောကျပွီး ၃နာရီအတှငျး အနျထှကျခဲ့မယျဆိုရငျတော့ ဆေးထပျသောကျဖို့လိုပါလိမျ့မယျ။
မေး ၆။ အရေးပျေါတားဆေးကို အတူမနမေီ ကွိုသောကျထားလို့ရလား?
ဖွေ – အတူနပွေီးမှသောကျတာ ပိုထိရောကျမှုရှိပါဆယျ။
မေး ၇။ အရေးပျေါတားဆေးကို အမွဲသုံးလို့အဆငျပွနေိုငျလား?
ဖွေ – အရေးပျေါတားဆေးဟာ မဖွဈမနအေရေးပျေါအခွအေနမြေားအတှကျသာ အသုံးပွုသငျ့ပါတယျ။အရေးပျေါတားဆေးက အခွားသန်ဓတေားနညျးတှလေောကျ ကာကှယျနိုငျစှမျးမမွငျ့မားတာကွောငျ့ မလိုလားအပျတဲ့ကိုယျဝနျရနိုငျခမြေားပါတယျ။ရရှေညျအသုံးပွုဖို့အတှကျ ကာကှယျနိုငျစှမျးမွငျ့မားတယျ့ အခွားရှေးခယျြစရာ သန်ဓတေားနညျးမြားစှာရှိပါတယျ (ဥပမာ – နစေ့ဉျသောကျဆေးကဒျ၊ကှနျဒုံး၊သုံးလခံထိုးဆေး၊သားအိမျတှငျးထညျ့ သန်ဓတေားပစ်စညျး၊လကျမောငျးတှငျးထညျ့ သန်ဓတေားပစ်စညျး …..စသဖွငျ့ )
မေး ၈။ အရေးပျေါတားဆေးရဲ့ ဘေးထှကျဆိုးကြိုးတှကေ အရမျးအန်တရာယျမြားတယျဆိုတာ ဟုတျလား?
ဖွေ – မဟုတျပါဘူး။အရေးပျေါတားဆေးမှာ နစေ့ဉျသောကျသန်ဓတေားဆေးမှာပါတယျ့ တူညီတဲ့ဟျောမုနျးတှပေဲပါဝငျပါတယျ။သို့သျောဟျောမုနျးပမာဏ ပိုမြားမြားပါဝငျတာကွောငျ့…. ဟျောမုနျးတှရေဲ့ဘေးထှကျဆိုးကြိုးဖွဈတယျ့ ပြို့ခွငျး၊ခေါငျးမူး၊ခေါငျးကိုကျ၊ရငျသားနာပငျြခွငျး၊ပငျပနျးလှယျခွငျး၊ဓမ်မတာစကျဝနျးမမှနျခွငျး စတာတှကေိုတော့ ခံစားရနိုငျပါတယျ။
မေး ၉။ နို့တိုကျမိခငျတှေ အရေးပျေါတားဆေးသောကျလို့ရလား?
ဖွေ – သောကျလို့တော့ရပါတယျ။သို့သျော ခဏတာမြှ မိခငျနို့ထှကျနညျးသှားနိုငျပါတယျ။နောကျပွီး နို့တိုကျမျခငျမှာသာမက မညျသူ့မှာမဆို အရေးပျေါတားဆေးဟာ မဖွဈမနအေခွအေနမှေသာ သုံးသငျ့ပါတယျ။
မေး ၁၀။ ကိုယျဝနျရှိနတောကိုမသိဘဲ မရေးပျေါတားဆေးသောကျမိရငျ ကိုယျဝနျပကျြကနြိုငျလား ?
ဖွေ – မပကျြကနြိုငျပါဘူး။
မေးခှနျး ၁၁။ အရေးပျေါတားဆေးခဏခဏသောကျတယျ့သူတှမှော ကလေးရဖို့မလှယျဘူးဆိုတာ ဟုတျလား?
ဖွေ – မဟုတျပါဘူး။အရေးပျေါတားဆေး ခဏခဏသုံးစှဲဖူးသူတှေ….. ကလေးယူဖို့ ကွိုးစားတယျ့အခါ ကိုယျဝနျရဖို့ခကျခဲတယျဆိုတဲ့အခကျြက လုံးဝမမှနျကနျပါဘူး။
မေးခှနျး ၁၂။ အရေးပျေါတားဆေးမကွာခဏသောကျဖူးသူတှေ ကိုယျဝနျဆောငျတဲ့အခါ ကလေးအပျေါထိခိုကျနိုငျလား?
ဖွေ – မထိခိုကျနိုငျပါဘူး။ကိုယျဝနျအပျေါရော ကလေးအပျေါပါ သကျရောကျမှုမရှိပါဘူး။
မေးခှနျး ၁၃။ အရကျ၊ဘီယာသောကျထားရငျ အရေးပျေါတားဆေးသောကျလို့မရဘူးဆိုတာ ဟုတျလား?
ဖွေ – မဟုတျပါဘူးနျော။အရကျ၊ဘီယာသောကျထားလညျးပဲ အရေးပျေါတားဆေးသောကျလို့ရပါတယျ။
မေး ၁။ အရေးပေါ်တားဆေးကို ဘယ်အချိန်သောက်ရလဲ?
ဖြေ - အတူနေပြီး နာရီ ၁၂၀အတွင်း သောက်ရပါတယ်။
စောစောသောက်လေ အာနိသင်ပိုရှိလေပါ။နောက်ကျမှသောက်လေ အာနိသင်လျော့နည်းလေပါ။
(* အတူနေပြီး ၂၄နာရီအတွင်းသောက်မယ်ဆိုရင် ကာကွယ်နိုင်စွမ်း 95%ရှိပြီး၊ အတူနေပြီး ၇၂နာရီအတွင်းသောက်မယ်ဆိုရင်တော့ ကာကွယ်နိုငွစွမ်း 89%ရှိပါတ်း။ဆိုလိုတာကာ....ဆေးသောက်တာစောလေ ထိရောက်မှုပိုရှိလေဖြစ်ပြီး၊ ဆေးသောက်နောက်ကျလေ ကာကွယ်နိုင်စွမ်း လျော့ကျလေဖြစ်ပါတယ်။)
မေး ၂။ အရေးပေါ်တားဆေးက ၂လုံးလား? ၁လုံးတည်းလား?
ဖြေ - ထုတ်လုပ်တယ့် ကုမ္ပဏီပေါ်မူတည်ပြီး ၂လုံးတွဲရှိသလို၊ ၁လုံးတည်းသောက်ရတာလည်းရှိပါတယ်(ဥပမာ - Lydia ကထုတ်တဲ့ အရေးပေါ်တားဆေး
1 Safe Pill ဆိုရင် ၁လုံးပဲသောက်ရပါတယ်။)
မေး ၃။ အရေးပေါ်တားဆေး ၂လုံးကဒ်က တစ်ခါတည်း ၂လုံးသောက်ရတာလား? တစ်လုံးနဲ့ တစ်လုံး အချိန်ခြားသောက်ရတာလား?
ဖြေ - တစ်ခါတည်း ၂လုံး သောက်ရတာပါ။
မေး ၄။ အရေးပေါ်တားဆေးသောက်ပြီး နောက်တစ်ကြိမ်လိင်ဆက်ဆံရင် ဆေးထပ်သောက်ဖို့လိုလား?
ဖြေ - လိင်ဆက်ဆံအပြီး အရေးပေါ်တားဆေးသောက်လိုက်တယ်။ပြီးနောက် ၂၄နာရီအတွင်း နောက်တစ်ကြိမ်
လိင်ထပ်ဆက်ဆံတယ်ဆိုရင် ဆေးထပ်သောက်ဖို့မလိုကာဘူး။၂၄နာရီကျော်ပြီးမှ နောက်ထပ်ဆက်ဆံတယ်ဆိရြင်တော့ ဆေးထပ်သောက်ဖို့ လိုပါတယ်။
မေး ၅။ အရေးပေါ်တားဆေးသောက်ပြီး အန်ရင် ဆေးထပ်သောက်ဖို့လိုလား?
ဖြေ - ဆေးသောက်ပြီး ၃နာရီအတွင်း အန်ထွက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ဆေးထပ်သောက်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
မေး ၆။ အရေးပေါ်တားဆေးကို အတူမနေမီ ကြိုသောက်ထားလို့ရလား?
ဖြေ - အတူနေပြီးမှသောက်တာ ပိုထိရောက်မှုရှိပါဆယ်။
မေး ၇။ အရေးပေါ်တားဆေးကို အမြဲသုံးလို့အဆင်ပြေနိုင်လား?
ဖြေ - အရေးပေါ်တားဆေးဟာ မဖြစ်မနေအရေးပေါ်အခြေအနေများအတွက်သာ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။အရေးပေါ်တားဆေးက အခြားသန္ဓေတားနည်းတွေလောက် ကာကွယ်နိုင်စွမ်းမမြင့်မားတာကြောင့် မလိုလားအပ်တဲ့ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ချေများပါတယ်။ရေရှည်အသုံးပြုဖို့အတွက် ကာကွယ်နိုင်စွမ်းမြင့်မားတယ့် အခြားရွေးချယ်စရာ သန္ဓေတားနည်းများစွာရှိပါတယ် (ဥပမာ - နေ့စဉ်သောက်ဆေးကဒ်၊ကွန်ဒုံး၊သုံးလခံထိုးဆေး၊သားအိမ်တွင်းထည့် သန္ဓေတားပစ္စည်း၊လက်မောင်းတွင်းထည့် သန္ဓေတားပစ္စည်း .....စသဖြင့် )
မေး ၈။ အရေးပေါ်တားဆေးရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေက အရမ်းအန္တရာယ်များတယ်ဆိုတာ ဟုတ်လား?
ဖြေ - မဟုတ်ပါဘူး။အရေးပေါ်တားဆေးမှာ နေ့စဉ်သောက်သန္ဓေတားဆေးမှာပါတယ့် တူညီတဲ့ဟော်မုန်းတွေပဲပါဝင်ပါတယ်။သို့သော်ဟော်မုန်းပမာဏ ပိုများများပါဝင်တာကြောင့်.... ဟော်မုန်းတွေရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်တယ့် ပျို့ခြင်း၊ခေါင်းမူး၊ခေါင်းကိုက်၊ရင်သားနာပျင်ခြင်း၊ပင်ပန်းလွယ်ခြင်း၊ဓမ္မတာစက်ဝန်းမမှန်ခြင်း စတာတွေကိုတော့ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
မေး ၉။ နို့တိုက်မိခင်တွေ အရေးပေါ်တားဆေးသောက်လို့ရလား?
ဖြေ - သောက်လို့တော့ရပါတယ်။သို့သော် ခဏတာမျှ မိခင်နို့ထွက်နည်းသွားနိုင်ပါတယ်။နောက်ပြီး နို့တိုက်မ်ခင်မှာသာမက မည်သူ့မှာမဆို အရေးပေါ်တားဆေးဟာ မဖြစ်မနေအခြေအနေမှသာ သုံးသင့်ပါတယ်။
မေး ၁၀။ ကိုယ်ဝန်ရှိနေတာကိုမသိဘဲ မရေးပေါ်တားဆေးသောက်မိရင် ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျနိုင်လား ?
ဖြေ - မပျက်ကျနိုင်ပါဘူး။
မေးခွန်း ၁၁။ အရေးပေါ်တားဆေးခဏခဏသောက်တယ့်သူတွေမှာ ကလေးရဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတာ ဟုတ်လား?
ဖြေ - မဟုတ်ပါဘူး။အရေးပေါ်တားဆေး ခဏခဏသုံးစွဲဖူးသူတွေ..... ကလေးယူဖို့ ကြိုးစားတယ့်အခါ ကိုယ်ဝန်ရဖို့ခက်ခဲတယ်ဆိုတဲ့အချက်က လုံးဝမမှန်ကန်ပါဘူး။
မေးခွန်း ၁၂။ အရေးပေါ်တားဆေးမကြာခဏသောက်ဖူးသူတွေ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့အခါ ကလေးအပေါ်ထိခိုက်နိုင်လား?
ဖြေ - မထိခိုက်နိုင်ပါဘူး။ကိုယ်ဝန်အပေါ်ရော ကလေးအပေါ်ပါ သက်ရောက်မှုမရှိပါဘူး။
မေးခွန်း ၁၃။ အရက်၊ဘီယာသောက်ထားရင် အရေးပေါ်တားဆေးသောက်လို့မရဘူးဆိုတာ ဟုတ်လား?
ဖြေ - မဟုတ်ပါဘူးနော်။အရက်၊ဘီယာသောက်ထားလည်းပဲ အရေးပေါ်တားဆေးသောက်လို့ရပါတယ်။